Ahoana ny fomba famerenana amin'ny laoniny amin'ny fomba fanarenana mora foana | Androidsis
Manana terminal Android miorim-paka ve ianao ary somary reraky ny sainao isaky ny te hiditra amin'ny maody fanarenana na maody Fastboot ianao ka tsy maintsy mikapoka ny tsindry bokotra manokana ho an'ny maodelin'ny terminal Android anao? Raha mamaly ny valiny SI, Manoro hevitra anao aho mba hanohy hamaky ity lahatsoratra ity satria handeha aho hanolotra sy hanome toro-hevitra fampiharana manaitra Android 4.1 sy ny dikan-teny avo kokoa Ny rafi-piasan'ny finday Google, izay hanamora sy hanamora ny asa iraisana ity.
Antsoina ny fampiharana amin'ny fanontaniana Famerenana amin'ny laoniny mora ary ny anarany, mamaritra raha misy izy ireo, Easy Restart, ianao no hanatsotra ny asa ny avereno amin'ny maody fanarenana amin'ny fomba tsotra indrindra azontsika an-tsaina fa ny fipihana bokotra fotsiny dia ho ampy hahatratrarana azy.
1 Inona no atolotry ny Easy Reboot ho antsika?
2 Fomba fiasa miverina mora
3 Avy aiza aho no misintona Easy Reboot?
Inona no atolotry ny Easy Reboot ho antsika?
Famerenana amin'ny laoniny mora, araka ny anarany, manome antsika fidirana mora sy tsindry iray amin'ny safidy Restart an'ny terminal Android miorim-paka avy amin'ny fahatsoran'ny fampiharana tsotra sy maivana mankany Android 4.1 na ambony kokoa ny rafitra fandidiana finday Google.
Ny fampiharana dia misy famolavolana tanteraka ny la Design Material ary misy safidy mahaliana toy ireo izay tanisaiko etsy ambany:
Fomba fiasa miverina mora
Mandrosoa indray amin'ny maody fanarenana.
Avereno amin'ny mode Bootloader.
Fanakatonana ny rafitra.
Widget amin'ny birao 1 × 1, 3 × 2 ary 3 × 3.
Avy aiza aho no misintona Easy Reboot?
Famerenana amin'ny laoniny mora Azonao atao maimaim-poana izany ao amin'ny Google Play Store amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy izay navelako teo ambonin'ireto tsipika ireto, na dia izany aza, ho an'izay te hampidina ny fampiharana amin'ny tanana amin'ny endrika apk ho an'ny fametrahana azy manokana. alaivo amin'ny alàlan'ny fanindriana an'ity rohy ity ihany.
Ataovy ao an-tsaina, izay misafidy ny misintona ny apk ary mametraka ny rindranasa amin'ny tanana, izay tsy maintsy avela aloha avy eo amin'ny toeran'ny terminal Android anao, ao amin'ilay faritra fiarovana, ny boaty fanamarinana hamela azy ireo hametraka rindranasa ivelan'ny Google Play Store, na izay mitovy, fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny maody fanarenana amin'ny fomba mora indrindra
Manana RKM 902 II aho ary nanomboka nihena tsikelikely, [ohatra tsy afaka mandroso na mihemotra amin'ny YouTube aho) ary manontany tena aho raha azoko atao amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny famerenako azy amin'ny maodin'ny orinasa: tsy haiko Ahoana ny fomba anaovana azy io raha miverina amin'ny laoniny aho amin'ny famerenana amin'ny laoniny na bootloader, farany tiako ho misy olona afaka manampy ahy satria tsy te-handefa aho raha tsy fantatro ny dingana. Ary hamaha ny olako koa.?